Nzira Yakanakisisa Yokuziva Botnet Malware Maererano na Semalt
Botnet malware ine kukwanisa kurega marefu uye nzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvinoreva kuti mhando yeZombies neBob inogona kukanganisa huwandu hwenyika pasi rose. Izvi zvinokonzera botnet malware dambudziko revanhu vazhinji, uye kuedza kurwisana naro kunoda kutorwa nokukurumidza. Frank Abagnale, iyo Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotsanangura kuti botnet malware ndiyo mhando yekombiyuta ine utachiona. Izvo zvinowanikwa uye pasi pekutonga kwakakwana kwemu spammer, hacker kana mushori. Zvose zviyero zvakasiyana-siyana izvo chikamu chetaneti iyi inonzi bots - auto elektritoeoed.
Botnet malware kuona uye kudzivirira kwayo:
Kuonekwa kwebhokisi rekushandisa malware hakusi nyore sezvazvakagadzirirwa kushanda pasina kutitaurira chero chinhu pamusoro pekuda kwavo. Zvisinei, kune dzimwe nzira dzekuona nekudzivirira nyore nyore.
1. IRC traffic
IRC zvinyorwa zvinosanganisira botnets uye botmasters vanoshandisa IRC kuti vataurirane.
2. High-end traffic inofamba ye SMTP
Mugwagwa wepamusoro-soro unobuda weS SMTP unofanirwa kutarisirwa nekukurumidza.
Zvishandiso zve-botnet zvakanaka uye zvinogadzirisa zvibereko zvepamusoro. Mawindo asingatarisirwi mawindo ariwo chiratidzo che botnet malware.
4. Somo kombiyuta
Kombiyuta inotonhora kana chipfoni yepamusoro ine high CPU kana kushandiswa kwemusoro chiratidzo che botnet malware.
5. Spike mumugwagwa
Spike mumugwagwa kunosanganisira Port 6667 yatinoshandisa IRC, Port 25 iyo yatinoshandisa ku spam emails, uye Port 1080 iyo yatinoshandisa kuti proxy server.
6. Mashoko akabuda
Mashoko akabuda haatumwi nevashandi chaivo. Chaizvoizvo, ivo vanotumwa nebho.
7. Nhaurirano nekombiyuta yako yekuwana uye nekukurumidza kwayo
Kana ukawana nyaya dzakawanda dzakabatana nekambani yekutengesa nekukurumidza, mikana ndeyokuti chigadzirwa chako chave chakarwiswa ne botnet malware.
8. Networking baselining
Kuita uye mabasa emutambo wako zvinofanira kuongororwa nguva dzose.
Mapurogiramu ese ekombiyuta yako kana foni yako inofanira kuongororwa kunyanya kuchengeteka kwako uye zvirongwa zvinorwisa malware.
Vashandi vanofanirwa kuchengetedza zvigadzirwa zvavo kubva kumabhodhoro ane ngozi zvikuru nekuisa mapurogiramu akakodzera uye mapurogiramu.
Kuumbwa kwe botnet malware online:
Bhodhi inoumbwa apo kombiyuta kana shandura inotapukirwa nehutachiona kana malware. Izvi zvinoita hackers kudzora icho chigadzirwa kure, uye iwe hauzive chinhu pamusoro payo. Vanokuvadza kana vanopikisa vanotungamirira mabhodeni vanonzi vari vatungamiri ve bot botasters kana botmasters. Vanokuvadza kana vanokanganisa vanoshandisa mabhodeni nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana; vazhinji vavo vanoshandisa bots uye mavairasi nokuda kwekunyorwa kwekombiyuta. Zvinowanzodiwa botnet mishandisirwo ndezvokuramba-kwe-service kurwisa, email spam campaign, utsotsi hwemashoko, uye adware kana spyware.
Ko botnet malware inotanga sei?
Kurwiswa kwebhodeni kunotanga nekutsvaga bot. Vashandi vanogadzira mabhoti kuti vaparadze minye, mavairasi, uye malware. Iyo inoshandiswawo kutyisidzira uye kuuraya huwandu hwemakombiyuta inogona kana kuti isingave ine mapurogiramu antivirus. Mavharesi e-botnet anonamatira kune device yako uye anoronga mavhavhari. Kubva ipapo, vanopikisa vanogona kutaurirana uye kutonga mabhoti, vachivapa mabasa chaiwo. Apo mabhaketani akazosvika kuhuwandu hunodiwa, vafudzi vanogona kushandisa mabhenetsiti ekuita zvimwe zvinorwiswa, zvakadai savha inotakurwa, kubira ruzivo rwemunhu, chengetedza uori uye kutumira spam emails.